လက်ခံရခက်ခဲသော………… | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » လက်ခံရခက်ခဲသော…………
Posted by Mr. MarGa on Nov 28, 2014 in Creative Writing, My Dear Diary, Think Tank | 54 comments
KZ's Diary တာဝတိံသာမှ အက်ဆေးများ
တဖြည်းဖြည်း ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ ပို ထိတွေ့လာတာနဲ့ အမျှ
တဖြည်းဖြည်း ပို ပို သိလာတာနဲ့အမျှ
ဖုံးကွယ်ထားတဲ့ အမှန်တရားတွေကို ကျနော်တို့ ပိုတွေ့လာရတတ်တယ်ဗျ။
တချို့ တချို့တွေ ကျပြန်တော့ ရသခြောက်ပါးစလုံး ရောမွှေထားသလို
သိလိုက်ရတဲ့အချိန်မှာ လက်မခံနိုင်ဘဲ စိတ်ဓာတ်ကျလောက်တဲ့အထိ ဖြစ်တတ်တဲ့ အမှန်တရားတွေလည်း ရှိသေးသဗျ။
ကျနော်ကတော့ အဲ့လို အမှန်တရားတွေကို hard truth လို့ နာမည်တပ်ပေးချင်ပါတယ်။
လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်လလောက်က ပေါ့ဗျာ
အလုပ်ကိစ္စတွေရော၊ လူမှုရေးကိစ္စတွေရော အဆင်မပြေဖြစ်ခဲ့ပါရဲ့
ခံရခက်ခက်နဲ့ အမှန်တရား အတော်များများကို အဲ့ကာလမှာ လက်ခံခဲ့ရတယ်။ :op:
ဒီအကြောင်းကို ချစ်လှစွာသော ဂျီးဒေါ် ခင်ဇော် နဲ့ စကားစပ်မိတော့ ပြောဖြစ်ရဲ့ (နှစ်ယောက်စလုံး အဆင်မပြေတာတွေနဲ့ နပန်းလုံးနေရတာ ကြိုညှိထားသလားမှတ်ရ) :chee:
ပြောရင်း ပြောရင်း hard truth ဘက်ကို ရောက်သွားတယ်။
သိတဲ့အတိုင်း ကိုယ်တွေက အစတစ်ခု ဖော်မိရင် အရှိန်ထိန်းလို့ ရတဲ့သူတွေ မဟုတ်တော့ အဲ့လို ခါးသက်သက် ဖျဉ်းရှရှ အမှန်တရားတွေ ဘယ်လောက်များ ရှိနေသလဲ လို့ ရှာကြည့်တော့ ဆယ့်တစ်ချက် တောင် သွားတွေ့တယ်ဗျ။
ရှာတွေ့ပြန်တော့ ဦးဂူဂဲ က အင်္ဂလိပ်လိုပဲ ပြောထားပေးတာမို့ မြန်မာလို ပြန်ပြောင်းဖို့ လိုလာပြန်ရော :n:
နှစ်ယောက်သား ခေါင်းချင်းဆိုင်ပြီး ဘာသာပြန်ကြည့်တာ အမြီးအမောက် မတည့်တာတွေပဲ ထွက်လာတာမို့ ဘာသာပြန်ကိစ္စ အတွက် ရွာထဲက သန်းကြွယ်သူဌေး ကိုဘလှိုင် ကို အကူအညီတောင်းပြီး ဘာသာပြန်လိုက်ရတယ်။
သူက တစ်ချက်ချင်းစီ ဘာသာပြန် ကျနော်တို့ တူအရီး နှစ်ယောက်က အောက်ကနေ စိတ်ကူးတည့်ရာ ဝင်ပြော ပေါ့လေ။ :mrgreenn:
အဲ့လို အဲ့လို သုံးပွင့်ဆိုင် ဆွေးနွေးထားတဲ့ ဖျဉ်းရှရှ အမှန်တရားတွေကို ဖတ်ကြည့်ကြပါဦး။
ဖတ်ပြီးလို့ အတွေးတစ်ခုခု ပေါ်လာရင်လည်း ဝိုင်းပြီး ပြောကြ ဆိုကြတာပေါ့ဗျာ။ :c:
1. There is no true love.
Ko Ba Hlaing – အချစ်စစ်ဆိုတာ ဘယ်ခါမရှိ…
KZ – Melificent ထဲက စကားပဲ။
လက်မခံချင်ပေမဲ့လည်း ဒီခေတ်မှာ ဒါဟာ အမှန်တရားတစ်ခု ဖြစ်နေပြီ။
Mister Marga – အရာရာတိုင်းကို အရှုံးအမြတ် တွက်နေတဲ့ ခေတ်ပဲလေ…
ချစ်ခြင်းမေတ္တာတွေ ရှားပါးလာတာ ဘာဆန်းမလဲ။
အချစ်စစ် ဆိုတာ မရှိဘူးဆိုတော့… အမုန်းစစ် ဆိုတာလည်း ရှိမှာမဟုတ်!!
ဒါကြောင့် ထာဝရ ရန်သူ ဟူသည် မရှိ။
2.There is no such thing asasoul mate
Ko Ba Hlaing – နှစ်ကိုယ့် တစ်စိတ် ဆိုတာ မရှိ…
KZ – (တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး) စိတ်တူ ကိုယ်တူ သဘောမျှကြည်ဖြူတယ်ဆိုတာမျိုး မရှိ
Mister Marga – သူ့စိတ်နဲ့ ကိုယ့်ကိုယ် (နှစ်ကိုယ့်တစ်စိတ်) နေဖို့ဆိုတာ အသာထား…
ကိုယ့်စိတ်နဲ့ကိုယ်တောင် တခါတခါ အံကျရဲ့လား
ဒီစကား ကြားလို့ သိပ်လည်း စိတ်မပျက်ပါနဲ့…
အရင်းနှီးဆုံး မိတ်ဆွေတွေက နှစ်ကိုယ့်တစ်စိတ်ထက် ပို တန်ဖိုးရှိပါတယ်။
မရနိုင်တာကို တမ်းတနေမယ့်အစား ရနိုင်တာတွေနဲ့ အကောင်းဆုံး လုပ်ကြတာပေါ့
3.Your problems are your own, no one else’s
Ko Ba Hlaing – ကိုယ့်ပြဿနာ ကိုယ့်ဟာပါ။ (တစ်ပါးသူဟာ မဟုတ်)
KZ – ကိုယ့် ပြသာနာကတော့ ကွကိုယ်သာရှင်းရမှာ။ ဟိ။ ဘယ်သူမှ ကူရှင်းပေးမှာ မဟုတ်။
ဆိုတော့ … ကိုယ်နဲ့ ထပ်တူခံစားပြီး ဖြေရှင်းပေးနိုင်မယ် ထင်တဲ့ အတွေးတွေဟာ အမှားကြီး မှားပါပေါ့လားးး။
Mister Marga – အသက်တစ်ရာ မနေရပေမယ့် အမှုတစ်ရာ ပွေတတ်တဲ့ လူ့ဘဝပဲ…
ဒါတွေ အကုန်လုံးကို မငြီးမငြူ ဘယ်သူကမှ လိုက်ရှင်းမပေးဘူး စိတ်ချ။
ကိုယ့်ဘဝကို ကိုယ်တိုင် ပုံသွင်းယူရမှာပဲလေ…
4.You are not important. Just get used to it
Ko Ba Hlaing – ကိုယ်က သာမည၊ အထာကျအောင် လက်ခံ။ (ကိုယ်က သာမည၊ သူက ကျိုက်ထီးရိုး :loll: )
KZ – ဘယ်သူ့ အတွက်မှ ကိုယ်က အရေးကြီးတဲ့ မရှိမဖြစ် လူ တစ်ယောက်မဟုတ်…
နေသား တကျ လက်ခံထားလိုက်ပါ…
ကိုယ့် အတွက်လည်း ဘယ်သူရှိမှ ဘယ်သူက မရှိမဖြစ်ဆိုတာမျိုး မရှိ
Mister Marga – ကိုယ်က သူ့အတွက် ဘယ်လောက်ပဲ အရေးပါတယ်ပြောပြော
သူ့ကိုယ်သူထက် ဘယ်သူမှ ပို အရေးမကြီးဘူးရယ်။
အဲ.. အပြန်အလှန်အနေနဲ့ ကိုယ်တိုင်လည်း ကိုယ့်အတွက်ကိုယ် အရင်တွေးတာပဲကိုး
ဆိုတော့ …ကိုယ့်အတွက် ကိုယ်သာ အဓိက… သူများအတွက် ကိုယ်ဟာ သာမည…
(သာမညပဲဆိုတော့ သိပ်လည်း အာရုံစိုက်နေစရာမလိုတော့တာပေါ့ဗျာ)
5.Getting no message is alsoamessage
Ko Ba Hlaing – စာမလာ သတင်းမကြားရင် မင်းနားလည်လိုက်တော့…
တစ်ခါတလေ သိပါရဲ့နဲ့ … “မအားလို့ နေမှာပါလေ၊ စိတ်ဆိုးနေလို့လား မသိဘူး” ဆိုတာမျိုးတွေနဲ့ မျှော်လိုမျှော်၊
ဇွတ်လိုက်မေးလိုမေးး နဲ့ အလိုက်မသိချက်ကလည်း ၉ လောက် ရှိတယ်။ ကွကိုယ် ပြောပါတယ်။
Mister Marga – လိုသုံး ဆိုတဲ့ စကားလုံးလိုပေါ့…
အကျိုးအမြတ် တစ်ခုအတွက် တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ပြောဆိုဆက်ဆံနေကြတာပါပဲ။
win-win situation မှာတောင်မှ သူ့အတွက်လည်း အကျိုးအမြတ်ကျန်အောင် လုပ်ပေးရသေးတယ်မလား…
ကိုယ် ကိုယ်တိုင်ဟာ သူ့အတွက် ဘာအကျိုးအမြတ်မှ မရရင်တော့ သူဘက်က ဘာမှ ထပ်မလာတာ အသေအချာ။
သိပ်လည်း ခံစားမနေပါနဲ့ ချင်းစိမ်းနဲ့ မိဿလင် သူကြင်မှ ကိုယ်ကြင် ပေါ့ ဟုတ်ဖူးလား။
6.Hidden Truths are Unspoken Lies
Ko Ba Hlaing – ဖုံးကွယ်ထားတဲ့ အမှန်တရားဆိုတာ မပြောဖြစ်တဲ့ မုသား…
KZ – ကိုယ့်မှာလည်း အဲ့ဒီ အမှန်တရားအများကြီးမို့… သူများရဲ့ အဲ့ဒီ မုသားတွေလည်း ခွင့်လွှတ်တယ်။ အဟေးဟေး…. :mrgreenn: :mrgreenn:
Mister Marga – အမှန်တရားဆိုတိုင်း သိကောင်းတယ်များ ထင်နေသလားဗျ။
ဘယ်ကိစ္စမှာမဆို လျှို့ဝှက်ချက်ဆိုတာ ရှိနေမှ။ Transparency ဆိုတာ အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိပဲ ကောင်းတယ်လေ။
မယုံရင် ပလတ်စတစ် အကြည်စကို အဝတ်အစားချုပ်ဝတ်ကြည့်ပေါ့ (အနည်းဆုံး ခွေးလိုက်ဆွဲခံရမယ်) :n:
ဒါကြောင့် သိရင်တောင် မသိချင်ယောင် ဆောင်ပြီး လွှတ်ပေးလိုက်ပါ။
7.Sometimes you have to forget what you want and remember what you deserve.
Ko Ba Hlaing – တစ်ခါတစ်ရံ ကိုယ်နဲ့တန်တာပဲ သတိရပါ။ လိုချင်တာ မေ့ထား…
KZ – သဘောကတော့ ကိုယ်လိုချင်တာတိုင်း နဲ့ ကိုယ်နဲ့မထိုက်တန်ဘူးပေါ့။ ရပါတယ်။
မစားတဲ့ အမဲ သဲနဲ့ပက်မယ်။
မရတဲ့ စပျစ်သီးချဉ်မယ်။ ဒါပဲ။
Mister Marga – နည်းနည်း လုပ်ပြီး များများ ရနေရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်…
များများ လုပ်ပြီးနည်းနည်း ရနေရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်..သေချာတယ် တစ်ခုခုတော့ မှားနေပြီ။
အရာတိုင်းမှာ တန်ဖိုး ဆိုတာရှိတာမို့ လိုချင်ရင် အဲဒီ တန်ဖိုးကို ပေးမှ ရတယ်။
အပေါ်ကလို ဖြစ်နေပြီဆိုရင်တော့ တစ်ချိန်ချိန်မှာ မတန်တဆ ပြန်ပေးဆပ်ရတော့မှာမို့ အသင့်သာ ပြင်ထားပေရော့။
8.Respect yourself walk away from anything that no longer serves you grow you or make you happy.
Ko Ba Hlaing – ကိုယ့်ကို မဖြည့်ဆည်းတော့တဲ့၊
မပျော်ရွှင်စေတော့တဲ့ အရာမှန်သမျှကို ဥပေက္ခာပြုဖို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် (လုံလောက်တဲ့) လေးစားမှုထားရမည်။
(ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် (လုံလောက်တဲ့) လေးစားမှုရှိလျင်
မပျော်ရွှင်စေတော့တဲ့ အရာမှန်သမျှကို စွန့်ခွာနိုင်ရမည်။)
KZ– မှန်တယ်။ မှန်တယ်။
ဒါပေမယ့် အဲဒါကိုပဲ တွယ်ကပ်နေမိတာ နှစ်ပေါင်းများစွာ…
Mister Marga – မြတ်စွာဘုရားက အနတ္တ လို့ ဟောခဲ့တယ်..
ဒါပေမယ့် အတ္တ အပေါ်မှာ ခုထက်ထိ တွယ်ကပ်နေကြတုန်းပဲ…
အဲ့ အတ္တ ကို နည်းနည်းလေးပဲ လျှော့ကြည့်လိုက်ပါ… လောကကြီးဟာ ပျော်စရာအရမ်းကောင်းသွားမယ်။
ဘာကြောင့် ကိုယ့်အတွက် အကျိုးမရှိတဲ့အရာတွေကို အကြောင်းမဲ့သက်သက် တွယ်ကပ်နေချင်ကြတယ်ဆိုတာ စဉ်းစားလို့ကို မရဘူး
9.“GONE” is the saddest word in the language, in any language.
Ko Ba Hlaing -“GONE” ဆိုတာ ဘယ်ဘာသာစကားမှာမဆို ငိုချင်စရာအကောင်းဆုံးပေါ့။
“GONE” နဲ့အဓိပ္ပါယ်တူတဲ့ မြန်မာစကား စဉ်းစားမရပါ။
(ခွဲခွာတာ၊ သေတာ၊ ပျောက်ဆုံးတာ၊ ဖျက်စီးခံရတာ(ပျက်စီးတာ)၊ သုံးလို့ကုန်သွားတာ..ဘာညာ)
နီးနီးနားနား ဗန်းစကား ဆို “ဂွမ်း” တယ်ဆိုတာ ဘယ်ဘာသာစကားမှာမဆို ငိုချင်စရာအကောင်းဆုံးပေါ့။
KZ – ဟင့်အင်းးး
ဝမ်းနည်းစရာဆိုပေမဲ့လည်း အရမ်းလေးလံလာရင် ဂွမ်းကနဲ နေအောင် လွှတ်ချလိုက်တာ အကောင်းဆုံးပဲ။။
ခုထိတော့ ကိုယ်ကချည်း ဂွမ်း နေသလိုပဲ။
(ဒီ မှတ်ချက်ကို မနိုင်ဝန်တွေ အောက်မှ ရေးသည်)
Mister Marga – ယုံကြည်ချက်တွေ…
အမှန်တရား လို့ ထင်ခဲ့တဲ့ မုသားတွေ…
အချိန်ပေး တည်ဆောက်ခဲ့ရတဲ့ ဂုဏ်ဒြပ်တွေ…
တဖြည်းဖြည်း ပျိုးထောင်ခဲ့ရတဲ့ ပုံရိပ်တွေ…
ဘောင်ခတ် ခံထားရတဲ့ အတွေးအခေါ်တွေ…
အဲဒါတွေ အားလုံး ပျက်စီး၊ ဆုံးရှုံး၊ ပျောက်ကွယ်၊ လွင့်ပြယ် သွားတဲ့ ခံစားချက်ကို တွေးကြည့်လေ…
GONE ဆိုတာ တစ်လုံးတည်းနဲ့ ပြည့်စုံနေတယ်
10.We met for the reason either you’reablessing oralesson
Ko Ba Hlaing – အကြောင်းကံဆုံ လို့ တွေ့ကြ၊ ကောင်းချီးမင်္ဂလာ နဲ့ သင်ခန်းစာ တစ်ခုခုပေါ့…
KZ– ခု အသက် ၃၀ နောက်ပိုင်းတော့ ဘယ်သူ့ကိုပဲ တွေ့တွေ့ ခွဲခွါဖို့ အကြောင်းအရာကို အလိုလို စဉ်းစား အသင့်ပြင်ပြီးသားဖြစ်နေတတ်ရဲ့။
Mister Marga – အမှတ်တမဲ့ပဲ တွေ့တွေ့…
တွေ့သမျှ လူတိုင်းကို ကျနော်တို့ မှတ်ချက် အနည်းငယ်တော့ ပေးမိတယ်မလား…
စိတ်ချပါ။ အဲဒီမှတ်ချက်က အကောင်းနဲ့ အဆိုး နှစ်မျိုးထဲမှာပဲ လည်ထွက်နေတာ။
ကိုယ်တိုင်လည်း သူများကိုမှတ်ချက်ပေးသလို သူများတွေ ပြန်ပေးရင်လည်း ပြုံးပြုံးလေး ခံယူလိုက်ပေါ့…
11.The worst thing about being lied is that you come to know you weren’t worth the truth.
Ko Ba Hlaing – မုသားဆို ခံရသူအတွက် အဆိုးဆုံးအရာမှာ (မိမိသည်) အမှန်တရားနှင့်မထိုက်တန်ကြောင်း သိလာရခြင်းပင်ဖြစ်သည်။
KZ – ဆိုတော့ …
Mister Marga – ပြောခဲ့ပါတယ်…
အမှန်တရားဟာ တခါတခါ ခါးသက်သက် နိုင်ပါတယ် လို့…
ပိုသိလေ ပို ခံရလေ…
စေတနာ မုသားပဲ ဖြစ်ဖြစ်…
တမင်တကာ မုသားပဲ ဖြစ်ဖြစ်…
ကိုယ့်အတွက် ပြောတာပါ လို့ပဲ မှတ်လိုက်ပါ…
Mister Marga – အဆုံးသတ် ပြောချင်တာကတော့ We live in hard truth ပါ လို့…
KZ – ထပ်ဖြည့်ရရင်တော့ We live in Hard Truths using White Lie ပါလို့။
:op: :op: :op: :op:
မျက်ရည် မကုန်သေးဘူးလား ဟင်
မုသားဆို ခံရသူအတွက် အဆိုးဆုံးအရာမှာ (မိမိသည်) အမှန်တရားနှင့်မထိုက်တန်ကြောင်း သိလာရခြင်းပင်ဖြစ်သည်။
ဖတ်ပြီးသိလိုက်ရတာ ၀မ်းနည်းလိုက်တာ….အမြဲလိမ်ခံနေရတယ်…အဟင့် ရွှတ် ဖတ်
စာသားလေးတွေ ကောင်းလို့ အားလုံးကို ကော်ပီ ယူသွားပါတယ်လို့စ်….
လက်ခံရ ခက်ပါတယ် လို့
ပြီးတော့ အကုန်လုံးဟာ အမှန်တရားတွေဘာ..
မောင်ရင့်ဟာက နေ့စဉ်ကြုံတွေ့နေရတဲ့လူမှုဘဝ အတွက်လား
နေ့စဉ်ကြုံတွေ့နေရတဲ့ လူမှုဘဝမှာ သီးသန့်ဖြစ်တည်နေတာတွေပါ :mrgreenn:
.ပထမဆုံးကတော့ ရှာဖွေလေတွေ့ရှိလေလုပ်တဲ့ ကိုရင်မာဃကိုချီးကျူးပါတယ် :))
.တတိယကတော့ အသက်ဝင်အောင် ၀င်ဆွေးနွေးပေးနိုင်တဲ့ လူမိုက်ခင်ဇော်ကို ချီးကျူးဗြဇေ :))
စတုတ္ထတစ်ယောက်ကို ကျုပ်က ချီးကျုးပါတယ်။
ကိုကြီးမိုက်ပါ – သူကပုံတွေနဲ့ အဓိပ္ပါယ်ပြုသွားလို့ပါ။
ရှာဖွေလေ တွေ့ရှိလေ လုပ်သွားတာ
ပထမနဲ့ တတိယကို နေရာပြောင်း
ဒီတစ်ခါ သူ့ကိုရှာခိုင်းတာ အဟီးး
မိုးလတ် ဘာသာပြန်တာကို အတော် သဘောကျတယ်။
ဘာသာ၂မျိုးလုံးရော အနုပညာပါ နိုင်နင်းတယ်
အဲ.ဦးမာဃ တို့ကတော့ လုပ်ပြီဟ..။ တစ်ချို့ ကုတ် တွေက ဓမ္မပဒ ထဲက
ကြာတော့ ဘယ်ထဲကလဲ မသိတော့ဘူးဗျ
အလုပ်​​တွေကြားထဲ.. အိပ်​ချင်​စိတ်​ကို​ဖျောက်​ရင်း.. နံပါတ်​ ၆ နဲ့ ၁၁ ကို ခံစားရင်း အီကွန်​မန့်​ကို ​ရေးလိုက်​ပါတီ..
ဘာသာပြန်​တာ ​တော်​ထှာ​အေ.. နာ့ထွမ်​စ​လေးရှင်း​တွေ မတင်​ရဲ​တော့ဝူး
ငိုချလိုက်… ငိုချလိုက်… :mrgreenn:
၆ နဲ့ ၁၁ ဟာ ကိုယ့်ကို သေစေနိုင်တဲ့ အမှန်တရားများးးးး
6. Hidden Truths are Unspoken Lies
. သိပ်မှန်တဲ့ စကား ….။
. အမှန်တရားဆိုတာ ဘယ်တော့မှ ပုန်းလျှိုးကွယ်လျှိုး မနေဘူး။
. သူက ပေါ်တင် နေတယ်။ ပေါ်တင် နေလွန်းအားကြီးလို့ .. ကွက်ကွက်ပြီး ကျော်ကျော် သွားတတ်ကြသေးတယ်။ နမူနာအားဖြင့် ကိုယ့်ရေးလေ့ရှိတဲ့ “ယနေ့ပို့စ်” လိုမျိုးပေါ့ … [ဟီဟိ .. အကွက်ဝင်တုန်းလေး]
. လူတွေ မွေးလာတယ်။ နေတယ်။ သေတယ်။ ဘယ်လောက် ရိုးစင်းလိုက်တဲ့ အမှန်တရားလဲ။
ဒီထဲက အချက်တွေက ကောင်း …
ဘာသာပျံသူက ကောင်း၊ ညီငေးနဲ့ မမဂျီး ကလည်း ကောင်း …
သိပ်သိပ် ကောင်းတဲ့ ပို့စ်ကောင်းလေးပေါ့ကွယ် ….
ဒီလ အချိန်မှန် တက်မလာရင်တော့ တွေ့ကြသေးတာပေါ့
-ထာဝရ ရန်သူ ဟူသည် မရှိ။
– နှစ်ကိုယ့် တစ်စိတ် ဆိုတာ မရှိ…
– ကိုယ့်ပြဿ နာ ကိုယ့်ဟာပါ။ (တစ်ပါးသူဟာ မဟုတ်)
-ကိုယ်က သာမည၊ အထာကျအောင် လက်ခံ။
-စာမလာ သတင်းမကြားရင် မင်းနားလည်လိုက်တော့…
-ဖုံးကွယ်ထားတဲ့ အမှန်တရားဆိုတာ မပြောဖြစ်တဲ့ မုသား…
-တစ်ခါတစ်ရံ ကိုယ်နဲ့တန်တာပဲ သတိရပါ။ လိုချင်တာ မေ့ထား…
– ဘာကြောင့် ကိုယ့်အတွက် အကျိုးမရှိတဲ့အရာတွေကို အကြောင်းမဲ့သက်သက် တွယ်ကပ်နေချင်ကြတယ်ဆိုတာ စဉ်းစားလို့ကို မရဘူး
– နီးနီးနားနား ဗန်းစကား ဆို “ဂွမ်း” တယ်ဆိုတာ ဘယ်ဘာသာစကားမှာမဆို ငိုချင်စရာအကောင်းဆုံးပေါ့။
– ကိုယ်တိုင်လည်း သူများကိုမှတ်ချက်ပေးသလို သူများတွေ ပြန်ပေးရင်လည်း ပြုံးပြုံးလေး ခံယူလိုက်ပေါ့…
-ဒါဆိုရင် လိမ်တဲ့သူကရော…??ယုံကြည်ချက်နဲ့ မထိုက်တန်သူပေါ့နော်…???
လွယ်မလိုနဲ့ ခက်ခဲသွားတဲ့ အရာတွေထဲ ငါခေါင်းနှစ်ကျိတယ်
ဖြူမလိုနဲ့ ညစ်ညမ်းသွားတဲ့အရောင်တွေဘဲ ငါတွေ့ရှိခဲ့တယ်
ငါ တြောက်ထဲဘဲ မှားတာဘာာာစ်
ဘွနဲ့ ရင်းပြီး သိလာတဲ့ အမှန်တရားတစ်ချို့!!!
အဲ့ဒီ hard truth တွေကို လက်ခံပြီး ပြောဆို နေထိုင် ကျင့်ကြံလိုက်တဲ့ အခါ မှာ လူလဲ တဖြည်းဖြည်း ရွာပြင် ရောက် ရောက် လာသလိုလိုပဲ….
နို့မို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ညာနေရလိမ့်မယ်။
ရွာပြင်ရောက်သူများမှ ကြိုဆိုပါတယ် :mrgreenn:
သများ ရဲ့ လက်ခံရခက်ခဲတဲ့ အမှန်တရားတွေ မနည်း ရှာထားရတာ။
အကုန်လုံးကိုလည်း အမှန်တရား အဖြစ် လက်ခံတယ်။
မှားတယ် လာမပြောကြနဲ့။ ဟွန့်။
. 4.You are not important. Just get used to it
.Ko Ba Hlaing – ကိုယ်က သာမည၊ အထာကျအောင် လက်ခံ။ :loll:
. 2.There is no such thing asasoul mate
.Ko Ba Hlaing – နှစ်ကိုယ့် တစ်စိတ် ဆိုတာ မရှိ…
အဲ့လိုတွေ တွေးတောင် မတွေးမိပါဘူးဆို……
လက်ရှိတော့ တွေးစရာတွေ ပေးလို့ ကျေးဇူး… နောက်မှ ထပ်ပြန်မန့်မယ်.. အခု ၆ မှာ တစ်နေတယ်… Run Through တော့ အကုန်ပြီးပြီ…
အမ် ဒါဆို ၆ ထိပဲ ဖတ်ရသေးတဲ့သဘောပေါ့
ဒါနဲ့ ဒီပိုစ့်ထဲကျ သဂျားက ကလေးလေးလို့ မထင်ရဘူး
ဒီတစ်လအတွက် အကြိုက်ဆုံးပိုစ့်တွေထဲက တစ်ပုဒ်အဖြစ် မှတ်လိုက်တယ်ဟေ့
wow – world of warcraft လား ဟင်
လက်မခံဝူးလို့ ပြောဝူးလေ အီးကယ်ဂျန်ရ
​ပြောင်​​မြောက်​တဲ့ မှတ်​ချက်​​တွေနဲ့ ပိုပြီးခံစားရ​အောင်​ လုပ်​​ပေးတဲ့သူ ​ရော ​ကျေးဇူးတင်​ပါတယ်​ ချီးကြူးပါတယ်​ ​လေးစားပါတယ်​ ဂုဏ်​ယူပါတယ်​။
နံပါ​တ်​ ၈ က မစ္စက မာဃ .. အဲ့​လေ.. မစ်​စတာ မာဃ ရဲ့ မှတ်​ချက်​ကလွဲလို့ အကုန်​လုံးကို လက်​ခံပါ​ကြောင်း..
သုံးယောက်ပေါင်းပြီး Rap သီချင်း ဆို နေ ကြတာ များလား။
ရက်ပ် စာသားတွေထက် လန်းပါတယ် အရီးခင်ဗျ :mrgreenn:
ဒီ သုံးယောက် ပေါင်းလို့ မှ မလန်း ရင် တစ်ခြား ဘာက များ ပိုပြီး လန်းနိုင် ပါ့တော့မလဲ။
ပြောချင်တာက မူ ကွဲ အသံကွဲ နဲ့ တစ်မျိုးစီ ဆွဲဆောင်ခေါ် သွားနိုင်တာ ကိုပါလေ။
သဂျား ဘာ​တွေ မန်းမှုတ်​ထားလည်းမသိဘူး။ ကွန်​မန့်​​ရေးတာ ၂ခါရှိပြီ ​ပျောက်​သွားလို့မ​ရေး​တော့ဘူး။
၁နဲ့၁၀ကိုပဲ​ ငြင်း​တော့မယ်​။ အချစ်​စစ်​ဆိုတာ တကယ်​ရှိတယ်​။ တန်​ဖိုးမထားလို့ရယ်​ မြင်​​အောင်​မကြည့်​လို့ရယ်​။နားလည်​​ပေးဖို့မကြိုးစားလို့ရယ်​။
ကိုယ်​တို့ရဲ့​တွေ့ဆုံမှုဟာ ​ကောင်းချီးမင်​ဂလာ လို့သတ်​မှတ်​ထားလိုက်​တော့တယ်​။ အတိတ်​မှာဆုံခဲ့သူ​တွေကို ​ကျေားဇူးတင်​သလို. လက်​ရှိအနားကလူ​တွေကိုတန်​ဖိုးထားတယ်​။ ​
ဘာမှ မမန်းရ မမှုတ်ရပါဘူးဗျ (သဂျီးကလိတာဖြစ်မယ် :mrgreenn: )
တကယ်က စိတ်ထားတတ်ဖို့ပဲ လိုတာပါ လို့
5.Getting no message is alsoamessage…
ဘယ်လိုပဲ အသဲက ခပ်ပါးပါးဖြစ်စေ ခပ်နက်နက်ဖြစ်စေ ကွဲနေပါစေပေါ့
နံပါတ် ၈ တခုနဲ့တင် လှည့်ထွက်လိုက်ဖို့ လုံလောက်နေပြီ
Gone ကိုတွေ့တော့ Phillip ကို သတိရတယ်
Baby, I’m not moving on.
I’ll love you long after you’re gone.
You will never sleep alone.
Baby, I’m not moving on,
I’ll love you long, long after you’re gone……. :mrgreenn:
ဝေးဝေးကသာ ချစ်ပါမည်။ :mrgreenn:
.ဘာသာပြန် တော်လိုက်တာ ကိုဘလှိုင်ရေ။ အစ်မတောင် အဲသလောက် ချောချောမွေ့မွေ့ မပြန်တတ်ဘူး။
.ဒါပေမယ့် ဘာသာပြန်တော်တာကိုပဲ ပြောတာနော်။ အဲဒီထဲက သဘောတရားတွေကို လက်ခံတယ်လို့ ပြော တာ မဟုတ်ဘူး။ အထူးသဖြင့် နံပါတ် ၁ ကို လက်မခံဘူး။ အချစ်စစ်ကို မယုံလို့ ကေတို့ သကြားတို့ အပိုကြီး လူပိုကြီး ဖြစ်နေကြတာ နည်းတောင်နည်းသေး။
. နံပါတ် ၆က Hidden Truths are Unspoken Lies ဆိုတာ ဖုံးကွယ်ထားတာဟာလည်း လိမ်တာပါပဲ လို့ ပြောတာလား။
. နံပါတ် ၁၁ ကတော့ ကိုယ့်အတွက် တကယ့်အသစ်အဆန်း။ ဒါမျိုး မကြားဖူးသေးဘူး။ ဆန်းသစ်နေတယ်။ .လိမ်တာကို ဘယ်လိုချွင်းချက်နဲ့မှ ခွင့်မလွှတ်နိုင်သေးတဲ့ ကိုယ့်အတွက် ခက်နေရော။ မိဘကိုတောင် အစ်မကမုန်းတာ ၊ သားသမီးကို လိမ်လို့၊ အမှန်တရားကို ဖုံးကွယ်ထားလို့ မုန်းတာ။ မိဘက အစ်မကို ဘာမှ မနှိပ်စက်ဘူး။ အကုန်ကောင်းတယ်။ ဒါပေမယ့်လိမ်ထားတယ်။ အဲဒါကို မုန်းတာ။ အဲဒီတော့ နံပါ ၁၁ ကြီးက အစ်မကို အခုဆို စတင်နှိ်ပ်စက်ပြီ။
ဒီခေတ်မှာတော့ ရှားလာတာကို ပြောတာပါ။
Lay Pai says:
လောကကြီးထဲမှာ အမှန်တရားဆိုတာ ဘာမှမရှိဘူးနဲ့တူပါတယ် ..
ဟာကွက်တွေ အမြဲတမ်းရှိနေတာ တွေ့ရတယ် ..
Hidden truth ဆိုတာက..အန်​တီပြုံး​ရေ..ကျွန်​​တော်​ နားလည်​သ​လောက်​ ဥပမာ​လေး စဉ်းစားကြည့်​တယ်​။ ကိုယ့်​အသက်​ ကိုယ့်​ပါစင်​နယ်​ စသည်​ဖြင့်​​ပေါ့​လေ လူများမသိ​စေချင်​တာ ရှိမှာ​ပေါ့။ အလိုက်​ကန်းဆိုးမသိ ​မေးရင်​ လိမ်​​ပြောရမဲ့ အ​ခြေအ​နေမျိုး ကြုံနိုင်​ပါတယ်​။ ​နောက်​တစ်​ခုကျ​တော့ အလိမ်​ခံရတာထက်​ ဪ ငါ့နှယ်​ အမှန်​အတိုင်း သိခွင့်​မရှ​အောင်​ ဖြစ်​​နေပါ​ပေါ့လားဆိုပြီး နာကျည်းရတာကို ဆိုတာဖြစ်​မယ်​။ :-)
ဘာသာပြန်တာကို လှတယ်လို့ အားလုံးက သဘောကျကြတယ် လှမှာပေါ့ ပြန်သူတွေက စိတ်လဲလှ လူလဲလှ ကိုး
Ko Ba Hlaing – စာမလာ သတင်းမကြားရင် မင်းနားလည်လိုက်တော့… ဆိုတာလို မကောင်းဘက်က ယူလို့ ရသလို
ဘာသတင်းမှ မကြားရတာက သတင်းကောင်းလို့ ယူလို့ မရနိုင်ဘူလား
ဆက်သွယ်နေကျ ဆက်သွယ်ရမဲ့သူက မဆက်သွယ်တော့ မဆက်သွယ်ချင်လို့ပါလေလို့ နားလည်ရမှာကို
ကိုယ်တွေက ဆက်သွယ်ချင်မှန်းသိ မချင်မှန်းသိ ဇွတ်လိုက်ခေါ်မိနေလို့ ပြောပြတာ။
နောက်ခါဆို လှမ်းကို မခေါ်တော့ဘူးမှတ်.။
ပထမ မှတ်ချက်ကို သဘောတူပါကြောင်း :mrgreenn: